ဘယ်လိုရောက်အောင် splash ကမ္ဘာ့ဖလား W ကပန်းခြံအာတာ?
15 ၏ 17 ရေကန်အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင့်ကြီးမားသောမိုးလုံလေလုံရေကန်၏တစျနှစျတလျှောက်လုံးမှာလည်းပွင့်လင်းတဲ့အပူပြင်ပရေကူးကန်ချိတ်ဆက်ဖွင့်. အဆိုပါလှိုင်းရေကူးကန်နှင့် လှိုင်းရေကန် ၏လေထုကိုနှိုးဆွ ပင်လယ်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်. အဆိုပါလှိုင်းရေကူးကန်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါသည်! ဒါဟာမိုးလုံလေလုံအသုံးပြုရန်တီထွင်အထူးပျဉ်ပြားနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူသုံးနိုငျ.
ရေကန် Garda က၎င်း၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတှကျအကျော်ကြားဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့် Caneva ကမ္ဘာ့ဖလားကယ့်ကိုအမှုအရာထချောက်ချား. တစ် ဦး ၏ဤနှစ်ဆ whammy ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ Movieland နှင့် Acquapark အကြားခွဲခြားထားသည်.
သင့်ရဲ့ swimsuit ထုပ်ပိုးနှင့်ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးရေပန်းခြံကိုရှာဖွေတဲ့ခရီးစဉ်အပေါ်သွားကြဖို့အဆင်သင့်? ဟုတ်ကဲ့ Heck! အကောင်းဆုံးသတင်း, သငျသညျ၏အကူအညီဖြင့်လွယ်ကူစွာကဤခရီးစဉ်၏လူအပေါင်းတို့အားရနိုင် SaveATrain ! အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအပိုဝန်ဆောင်ခနှင့်အတူ, သငျသညျကြောက်မက်ဘွယ်စီးနှင့်ကောင်းမွန်သောကြိမ်ပေါ်သုံးဖြုန်းဖို့ပိုရှိသည်လိမ့်မယ်! စာအုပ်နွေရာသီအားလပ်ရက်ကြောင်း, ယခု!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-water-parks-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#နွေရာသီ #နွေရာသီ #ရေတံခွန် europetravel familytrip နွေရာသီ